Google zụtara Moodstocks, ọkachamara na nchọpụta ihe | Gam akporosis
Google na-azuta ihe nbido nke na enyere ndi oru aka ichota ihe
Google zọọ ụkwụ na Tango na Lenovo ama nke ahụ na-enyere onye ọrụ aka ịlele oghere dị n’ime ya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sensọ nke ekwentị a pụrụ iche nwere. Ọrụ nke yiri ka ọ gaghị ahụ ìhè ụbọchị, mana nke ahụ anọnyere anyị izu ole na ole. Ọ bụ Google na nzọ na ọrụ ọhụrụ na ahụmịhe nke iji nke ọ na-enyekarị nkwado zuru oke iji weta ha n'ahịa, ma ọ bụ ezie na ọtụtụ na-anọgide n'akụkụ ụzọ.
Ndị Na-ahụ Maka Ugwu enwetawo Moodstocks, mmalite nke French nke pụrụ iche na ihe ude site na smartphone, nke gosipụtara mmasị Google nwere ịbawanye ike ya maka AI ma ọ bụ ọgụgụ isi. N'adịghị ka ngwaahịa ndị ọzọ, Moodstocks na-adaba na smartphone n'onwe ya kama iji sava nke ọ ga-enweta data maka njirimara ihe, dịka ọ ga-eme na ngwa Goggles.
Ọ bụkwa Google Photos ebe anyị na-ahụkwa na ịnabata ihe oyiyi n'ime foto, yabụ Google na-achọ ịnwe ihe kachasị mma ịzụta ihe kachasị mma nke metụtara ọgụgụ isi na ndị enyemaka onwe onye ga-elekọta ọtụtụ ọrụ anyị maka afọ ndị na-abịanụ.
Ọ bụ Moodstock n'onwe ya na-ekwupụta na ọ ka nwere ụzọ dị anya n'ihu. igwe mmụta, ọ bụ ezie na iji Google ọ ga-n'ezie shortened. Ewezuga eziokwu ahụ bụ na a nụrụ asịrị na Google na-arụ ọrụ na atụmatụ nke na-enye ndị ọrụ gam akporo ohere ịchọ site na ekwentị ha, ọ bụ ezie na ihe anyị amaghị bụ ma ọ bụrụ na nnweta a ga-enwe ihe ị ga-eme, dịka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya si kwuo.
Anyị n'ụzọ zuru ezu mgbari igwe mmụta na Alexa, Cortana, Siri, Google Ugbu a, Foto Google, ngwa ntụgharị ederede Microsoft na ngwa ndị ọzọ gụnyere ụdị ngwaọrụ na ụgbọ ala akpaaka dịka ndị anyị ga-eme ka ha were anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-azuta ihe nbido nke na enyere ndi oru aka ichota ihe
TP-LINK na-ebupụta Neffos Y5L na ihuenyo 4,5-inch, Snapdragon 210 na gam akporo 6.0
Wydr dị ka Tinder, mana maka ịzụ nka